Tag: ọdịnaya mmepe | Martech Zone
Tag: ọdịnaya ọdịnaya
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2020 Tuzdee, Machị 2, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na anyị na-ede banyere ahịa ọdịnaya ruo ihe karịrị afọ iri, echere m na ọ dị mkpa ka anyị zaa ajụjụ ndị bụ isi maka ụmụ akwụkwọ abụọ nke ịre ahịa yana ịkọwapụta ozi enyere ndị ahịa nwere ọfụma. Ọdịnaya ọdịnaya bụ okwu na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ezie na ọ dịwanye ọkụ n'oge na-adịbeghị anya, enweghị m ike icheta oge mgbe azụmaahịa enweghị ọdịnaya metụtara ya. Mana enwere ihe omuma ahia karia ibido blog, ya mere
A na-enwekarị njedebe abụọ na ụlọ ọrụ Martech, igwe ojii na-emetụta ya, na ikpo okwu guzo naanị ya. Mana ụfọdụ n'ime ọmarịcha ọganihu m na-ahụ bụ nyiwe nke nwere ike ịme usoro ahịa agile ma belata mkpa maka ịnyefe data ma ọ bụ njikọta dị oke ọnụ. Ochicho maka ihe di elu iji wulite ikike, nweta ikike na engines ọchụchọ, ma na-akwalite ịkekọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-arịwanye elu. Ihe ndị ahịa na-achọ na-arịwanye elu mgbe ihe onwunwe dị larịị ma ọ bụ